ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုတွေ ရှိလာနေတဲ့ Kia ရဲ့ နာမည်ကြီး ကားမော်ဒယ် တစ်ချို့ ! – MyMedia Myanmar
ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုတွေ ရှိလာနေတဲ့ Kia ရဲ့ နာမည်ကြီး ကားမော်ဒယ် တစ်ချို့ !
ကား မော်ဒယ် အသစ်တွေ ထွက်ရှိတိုင်းမှာ ဈေးနှုန်း တွေလည်း ပြောင်းလဲ ‌သွားလေ့ရှိတာ သဘာဝပဲ ဖြစ်ပြီးတော့ လူကြိုက်များ ကျော်ကြားတဲ့ ကားတွေအကြားမှာ ရွေးချယ်စရာတွေက ပိုပိုပြီး များပြားလို့ လာနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း Kia အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ 2021 ခုနှစ် အတွက် ကားမော်ဒယ် တစ်ချို့ကို ဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲတွေ နဲ့အတူ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CarsDirect ရဲ့ အဆိုအရတော့ မကြာသေးမီကမှ Dealership တွေထံကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ကားဈေးနှုန်း အချက်အလက်တွေအရ ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောက် အထိ ဈေးတက်သွားတာ တွေကိုလည်း တွေ့မြင်ထား ရသလို Destination Charges တွေပါ မြင့်တက် လာတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ အခုလ အစော ပိုင်း လောက်ကပဲ Kia K5အသစ်ဟာ $ 100 လောက်ကို ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ အခုလိုဈေးနှုန်း မြင့်တက် မှုတွေကိုတော့ အခြားသော ကားမော်ဒယ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Forte GT ၊ Soul ၊ Seltos နဲ့ Sportage တို့မှာပါ ကြုံ တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းအားကောင်းတဲ့ အမျိုးအစား တစ်ရပ် ဖြစ်တဲ့ 2021 Kia Telluride ဟာ ဆိုရင်လည်း ယခင်ထက် $ 200 လောက်ကို ဈေးမြင့်တက် လာခဲ့ သလို SX Trim ဟာ ဆိုရင်လည်း $ 300 လောက်ကို ထပ်မံ ဈေးတက် လာဦးမှာပါ။ ဒါဟာ အခု ဆိုရင် 2021 Telluride အတွက်ကတော့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဈေးနှုန်း မြင့် တက်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ အနေအထား တွေက သိပ်ပြီးသိသာ တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ မဟုတ်တာ ကြောင့် ဝယ်ယူ လိုသူ တွေ အနေနဲ့သိပ်ပြီး သတိထားမိမှာတောင် မဟုတ်ဘူး လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုပြီး ဈေးကြီးနေတဲ့ Destination Charges တွေ အကြောင်းကတော့ ပြောစရာ ဖြစ်လာ တော့မှာပါ။ အဆိုပါ ဈေးနှုန်းတွေဟာ အခု ဆိုရင် ကား တိုင်းနီးပါးမှာ $ 30 လောက် အထိကို မြင့်တက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း $ 995 လောက် အထိကို ဖြစ်လာ ခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် SUV တွေနဲ့ Sedona Minivan ( Carnival ဟု အမည် ပြောင်းထား ) ဟာ ဆိုရင်လည်း Destination Fee အသစ် အဖြစ် $ 1,175 အထိ ပေးဆောင် ရတော့မှာ ဖြစ်ကာ ယခင် ကထက်တော့ $ 55 အထိ ဈေးတက် လာခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် 2021 Stinger နဲ့ Telluride တို့ ဟာ ဆိုရင်လည်း Destination Charges အသစ် တွေ အဖြစ် $ 1,045 နဲ့ $ 1,225 လောက် အထိ အသီးသီး ကျသင့်မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကူး ကာလရဲ့ ဒီဇင်ဘာ လ ၃၁ ရက်နေ့က ဇန်နဝါရီ လ ၁ နေ့ အထိ ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာပဲ Kia Telluride SX ဟာ ဆိုရင် $ 355 လောက် အထိ ချက်ချင်း ဈေးတက်သွားခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်ကာ ကံကောင်းတာကတော့ အဆိုပါ ကားက အခု အချိန် အထိ Lineup ထဲက ဈေးအကြီး ဆုံး ကား စာရင်းဝင် ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လည်း အဆိုပါ Telluride ရဲ့ ‌ဈေးနှုန်းတွေက တော့ 2019 ခုနှစ် စတင် ထုတ်လုပ် စဉ် ကတည်းက ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်လက် မြင့်တက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2021 Kia Telluride ဟာ အခု ဆိုရင် $ 33,145 ကနေ စတင် နေပြီ ဖြစ်ကာ စတင် မိတ်ဆက် တုန်းက ထက်တော့ $ 1,000 လောက် အထိ မြင့်တက်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သေချာတာကတော့ $ 36,085 အထိ ကျသင့် နေတဲ့ 2021 Toyota Highlander L ရဲ့ $ 2,700 နီးပါး လောက် ကို ဈေးသက်သာနေဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပါပဲ။
အခုလိုမျိုး နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမျိုးအစားအသစ်တွေ အနေနဲ့ ဈေးနှုန်း မြင့်တက် လာခဲ့ရတာကတော့ အကြောင်းပြချက် ကြီးကြီးမားမားရယ်လို့ မရှိပြန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လည်း အမျိုးမျိုးသော အကြောင်း ခြင်းရာတွေ ကြောင့်သာ ဈေးတက်နေခဲ့ရတာ သေချာပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေ ဈေးတက်လာခဲ့တာ တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ရာမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်တွေ မြင့်တက်လာတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခု တစ်ကြိမ်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုတွေ မှာတော့ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ရဲ့ ရိုတ်ခတ်မှု အကျိုးဆက် ကိုလည်း ထည့်တွက် ဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု လိုမျိုး ဈေးတက် ရခြင်းဟာ ဝယ်ယူလိုသူတွေ အပေါ်တော့ အတားအဆီး တစ်ရပ်လို ဖြစ်လာစေမှာမဟုတ်ပဲ Kia နေနဲ့ ဝယ်ယူသူတွေ အတွက်ကို Cash Back အစီအစဉ် တွေနဲ့ အခြား သော Loyalty Discount တွေနဲ့လည်း ပြန်လည်ဆွဲဆောင်သွား နိုင်ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုတွေ ရှိလာနေတဲ့ Kia ရဲ့ နာမည်ကြီး ကားမော်ဒယ် တစ်ချို့ ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-25T14:30:31+06:30January 25th, 2021|MYCARS MYANMAR|